mubvunzo Mubvunzo chete
1 gore 11 ago #360 by Dariussssss
Iyeyu anofanira kuva mubvunzo nyore chaizvo ... kana pamwe kwete. Ndiri Airbus kurudza ndinobvuma kuti. Uye sezvo mbonano wangu wekutanga ndege Sims, kuti ndege mugadziri kufarira. Saka, muna FGFS, FS2004 uye zvino FSX, pane ungamboti zvakanaka uye hwakavimbika Airbus ndege. Pane payware ndege asi ndinongoda haigoni kuchitenga.
Mubvunzo uyu: Zvakadini mamwe maviri Sims, X-Plane uye P3D, hakuna zvizere kushanda freeware Airbus chero wavo?
Huru dambudziko ndine pamwe Airbus ndege, zvakananga Thomas Ruth A330 / 340 uye PA A380 muna FSX ndechokuti PFD achishaiwa chimwe nyore chinhu. IAS tepi haasi kuratidza zvose overspeed uye mudanga, uye ndege payo anozvipira haisi anovhundutsa nayo. No nzira kubhururuka nayo zvakanaka. Kwemwedzi Ndiri kuedza kuwana rubatsiro vamwe kuti asi hapana, ari yose FSX vomunharaunda anoda kundibatsira.
A320 multi-livery rongedza, kuwanika pano pana Rikoooo Zvinoshamisa, uye zvose ndinoda ndiko uchatamisa zvimwe zvinhu, sezvinoita PFD kuna ataurwa ndege, kana kuti TR A330. Abvunzwa kwose kwose sei kuzviita ... wakarurama kutambisa nguva yangu.
Kudzokera FGFS ndiye okupedzisira nzira yangu chaizvo asi ini nomufaro ndichakuitira izvozvo kana hapana mumwe chisarudzo.
1 gore 11 ago #367 by Gh0stRider203
KANA Hakusi pakuhuratidza, unogona kuti aongorore aircraft.cfg faira yokugadziridza kuti. chaizvoizvo ndaifanira kuita kuti pamwe CLS DC-10-30F. Ivo shorted iwe pamusoro 4.5K marita nemafuta, uye kutura kwakakomba Max uremu zvakanaka pasi chii chaizvoizvo zvakanga.
Vaviri tweaks kuna aircraft.cfg faira zvikaita sei kuva. zvino ndinogona kubhururuka Max-siyana ndege hapana dambudziko
1 gore 11 ago #369 by Dariussssss
Simply kwete pakuhuratidza, uye cfg faira, mudanga nokukurumidza zvachose shamisa ... 120 kts? Imboona vamwe Cockpit tasvika Vhidhiyo pana YT uye muchaona kuti zviri zvechokwadi pakati 155 uye 160, saka dzimwe 120 ... iwe achapedzisira munhau.
Ini vachaedza kuti, nokuti chokwadi.
1 gore 11 ago #371 by Gh0stRider203
Ndiri gonna muve timboona My Dash-8 kuti cfg faira uye nechokwadi chokuti Kuziva zviri setup chaipo nekuti handisi kunyange kuwana pedyo Max siyana pamusoro Kuziva uye kuti haasi chaizvo kubatsira chero elnaz
Hatigoni kuva risina parinogumira parafini kana taenda uye refueling epakati mhepo iri kwaishorwa.
1 gore 11 ago #372 by Dariussssss
Aircraft Developers ndivo va ... isu? G ....
1 gore 11 ago - 1 gore 11 ago #373 by Gh0stRider203
rombo rakanaka kuwana Me nharo newe pane chimwe LMAO
Ya kuzviziva ungaora Nice kana apo vanhu kuti ndege iyi nokuda Flight Sim chaizvoizvo ivo kutsvakurudza zvimwe f'in 'kutanga, ya munoziva ???? >.>
Ndinofunga Ndichaenda kupisa dzimwe mumakomba mudenga panguva Mach 2 muna Concorde. NO ZVAVIMBISWA Handidi Buzz munhu shongwe shoma munzira elnaz
1 gore 11 ago #386 by Dariussssss
Ndinofunga, nokuti Developers avo, zvingava zvakakwana chete kutaura chaicho nyika vezvikepe.
About A340 wangu PFD Matambudziko ... zvakanaka zviri nyore kuchinja zvimwe zvinhu zviri ndege .cfg faira, asi kuti anoshandura hapana. The PFD haasi kuratidza zvose overspeed uye mudanga., Saka ndinofunga ndakanga zvakarurama. Izvozvo zvinofanira kushandurwa imwe nzvimbo iri VC kana emadziro mafaira uye handina tichengetedze sei kuzviita.
Ndakanga saka kupenga nokuda kwaizvozvi, kuti chaizvoizvo ini ndakagadza FGFS uye A346 ... kuipa mwoyo, haagoni vatombotanga ikoko, saka kudzokera FSX uye vanotamburira kuti kugadzirisa kuti PFD.
1 gore 11 ago #387 by Colonelwing
apo hondo ,, mwoyo nguva ,,, pane zvakanaka chinhu pamusoro ichi zvose ,,, zvauri kudzidza.
Its kwete nguva dzose nyore kudzidza muupenyu huno ,, Ndinobvumirana ,, asi panguva risi rako kuedza zvakaoma kugadzirisa dambudziko,
uye kuti ndiyo nzira nhungamiro imwe succesful nguva kuuya ...
1 gore 11 ago #389 by Dariussssss
Hey Colonelwing, chii chirikuita?
Eya, kwete kushanda kuti nzira neni, kanenge kwete Air Sims. Kana chinhu asingashandi zvinofambira zvakananga tsvina remarara. Havadi kutambisa chero nguva uye tsinga pairi.
Muupenyu chaihwo, dzinobvumirana kukonzera upenyu hwangu hwose ibasa, asi kuti chimwe nyaya, kwete nzvimbo ino.
1 gore 11 ago #392 by Gh0stRider203
zvakanaka, zvose zvechokwadi kuita kutarisa Wikipedia kana totaura ndege info, nokutendeseka ... zvinenge zvebhizimisi.